. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: May 2009
တွေ့ဘူးသောဘလော့ဂါများကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ .. ဘလော့မရေးခင်တည်းက ခင်တာ သူငယ်ချင်းကြီး ဗညားရှိန်ပါ .. အဝေးသင်တက်တုန်းက ခင်တာ .. နောက်ပိုင်း ဒီကိုရောက်ပြီးမှ သူလည်း ဘလော့ရေးဖြစ် .. မိုးခါးလည်း ဘလော့ရေးဖြစ်ခဲ့တာ ..
နောက် .. ဂျပန်ကောင်လေး .. ဆောင်းနှင်းရွက် .. ဘာတွေတုန်း တို့နဲ့ စုဗူးမှာ စာရေးရင်းခင်ခဲ့တယ် .. အပြင်မှာ တွေ့ကြရင်း နောက်ပိုင်းလည်း ဘလော့ရေးဖြစ်တော့ ဘလော့ မောင်နှမပေါ့ .. နောက်ပိုင်း လျှောက်လည်ရင်း ထပ်တွေ့ခဲ့တာက ဝေမင်းအိမ် ..
ဒီမှာနေပြီး ၁နှစ်နီးပါးမှာ ရန်ကုန်ပြန်ခဲ့တယ် .. အဲဒီမှာ တွေ့ဖြစ်တာ ပျိုခေတ်ပါ .. ပျိုခေတ် နဲ့လည်း စုဗူးမှာတည်းက ခင်လာတာပါ .. ရန်ကုန်ကျမှ တွေ့ဖြစ်ကြတယ် ..
ရန်ကုန်ကပြန်လာပြီး နောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းမှာ မောင်နှမတွေနဲ့ စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ် .. စလုံးမှာ နေနေကြတဲ့ မောင်နှမတွေ စကားပြောရင်း ရင်းနှီးလာကြတယ် .. တကယ် ပြောဆိုနောက်ပြောင်ပြီး တကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် .. ပုံတွေမြင်ရင် သိမှာပေါ့ ..
တခါကျတော့ မရောင်က နန်းကြီးသုတ်ကျွေးမယ်တဲ့ .. တွေ့ကြမယ်ပေါ့ .. မငြင်းပါဘူး .. မူလည်းမနေဘူး .. မသွားရင် ငတ်ရုံပေါ့ .. ဒါနဲ့ လာမယ်ဆိုပြီးသွားဖြစ်တယ် .. မရောင်ရဲ့ အိမ်မှာပါ .. အဲဒီတုန်းကတွေ့ဖြစ်တာတော့ မရောင်ရယ် .. မကြယ်ဖြူစင် ရယ် .. နေခြည်ရယ် မရောင်သုတ်ကျွေးတဲ့ နန်းကြီးသုတ်စားရင်း တွေ့ခဲ့တယ် .. အဲဒီမှာ တီချမ်း နဲ့လည်း အွန်လိုင်းကနေ ဆုံခဲ့တယ် .. ပျော်စရာကြီးတဲ့ တီချမ်းကကြည့်ပြီးပြောတယ် ..း) .. နောက်ထပ် ကိုရဲက အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မျက်နှာပြပါတယ် .. ဒီတော့ မြင်ဘူးသွားတယ်ပေါ့ .. :D
နောက်တခေါက်ကျတော့ အဆိပ်က ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် ပူဆာရင်း ဆုံဖြစ်ကြပြန်ရော .. အဲဒီမှာ .. အောချပ် mrt မှာ စစချင်းတွေ့တာက ချစ်မမ ရောင် ရဲ့ ဘေးမှာ အကိုကြီးတယောက် .. မရောင်လှမ်းအော်လိုက်တဲ့ဘက် ကြည့်လိုက်တော့ တရုတ်ပေါက်စပုံနဲ့ အဆိပ်က လက်မှတ်ကို ရှေ့ပြေးအနေနဲ့သွားဝယ်မယ်တဲ့ .. နောက် မရောင်ဘေးက အကိုကြီးက မေးတယ် .. သူဘယ်သူလဲ သိလားတဲ့ .. သိဘူးလို့ ဆိုတော့ ပုံကြီးနဲ့ ဒီလောက်တင်ထားတာ မသိဘူးလားတဲ့ .. :P .. အသည်းနှလုံး မရှိဘူးကြေငြာနေတဲ့ ကိုရီနို ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှန် ..
နောက် ဆက်စောင့်နေရင်း mrt အောက်ဆင်းပြီးတော့ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ရင်းရောက်လာသူတွေက ဦးရှင်ကြီး နဲ့ ကိုတောင်ပေါ် .. နောက်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံကို ချီတက်ကြတယ် .. ဒီလိုနေ့ အဲဒီနေ့လေးကလည်း အမှတ်တရပါပဲ .. :D
တခါကျတော့ မိုးခါးမွေးနေ့ရောက်လာပြီလေ .. မရောင်အိမ်မှာ စားကြမယ်ဆိုပြီး ချိန်းကြတယ် .. အသစ်တွေ့ဘူးသူတွေကတော့ .. mrt မှာချိန်းထားပြီး ဆုံကြတာက ကိုသီဟသစ် .. ကိုနေးတစ် .. (သစ်နဲ့တစ်ပါလား :P) .. နောက် မရောင်အိမ်ကို လိုက်လာကြသူတွေက ဖိုးဂျယ်နဲ့ စနေသား .. ကွန်ပျူတာတွေဖွင့်ပြီး မွေးနေ့ကို တူတူ ဆင်နွဲပေးသူကတော့ ကိုဖိုးစိန် .. အားလုံးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ပျော်ရွှင်စရာနေ့လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ..
ညနေဖက်ကျတော့ မုန့်ထပ်စားရင်း တွေ့ဖြစ်တာက ပီအမ်ပါ ..
ဒီမောင်နှမတွေက တော်တော်ရေစက်ပါတယ်ထင်ပါတယ် .. တယောက်က သွားမယ်ဟေ့ဆို နောက်က လိုက်ပြီးသားပဲ .. ဘယ်လိုမှ မအားလို့ မလာနိုင်သူတွေကလွဲရင် ဆုံဖြစ်ကြပါတယ် .. ရှေးဘ၀က ရေစက်တွေပေါ့ ..း)
တရက်တော့ ကိုတောင်ပေါ်နဲ့ စကားပြောရင်း တို့ဖူးနွေးစားချင်တယ်ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီလိုနဲ့ လူလိုက်စုလိုက်တာ ညနေဘက်ဆုံဖြစ်ကြပြန်ရော .. အဲဒီမှာ မကောင်းကင်ပြာက လာချင်ပေမယ့် အလုပ်ကိစ္စကြောင့် မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး .. အသံလေးတော့ကြားလိုက်ရတယ် .. နောက် တွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီး တက်စီငှားလာသူက နွေးနွေး ပါ .. ပါဆင်နယ် ဘော့စ်နဲ့ အတူ :D .. အဲဒီနေ့ကလည်း တ၀ါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ည ကိုးနာရီ ခွဲသွားပါတယ် .. :D
ခု စနေနေ့က World Blood Donor Day အတွက် သွားရင်း တွေ့ဖြစ်တာက ကိုဇူလိုင်နဲ့ ကိုရွာသားလေးဝိုင်တီယူပါ ..
ကုန်ပြီထင်တယ် .. စဉ်းစားရတာ ခေါင်းခြောက်သွားတယ် .. ကျန်သွားရင်လည်း အကြောင်းကြားပေးနော် .. အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ကြွေးဆပ်နေတာမို့ပါ .. အဆိပ်ခွက်တဂ်တဲ့ ကြွေးတော့ ကျေပါပြီ .. နောက် နှစ်ခု ကျန်ပါသေးတယ် .. ကိုဝသန်ကြီး ရေးပေးမယ်နော် .. အပျိုကြီးဖြစ်အောင်တော့ ကြိမ်စာမတိုက်ပါနဲ့ .. :P
ဘယ်သူ့ကိုဆက် ဒုက္ခပေးရမလဲ .. ကိုဝသန်ကြီးကို လက်စားချေပါ့မယ် .. သဘောတူရင် လက်ခုပ်တီးကြပါ .. :P
အားလုံးပဲ ဂွတ်တညပါ .. အိပ်ပျော် စားဝင်ကြပါစေ .. :D
ရေးသားသူ moekhar at 5/31/2009 11:58:00 PM 19 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 5/29/2009 04:27:00 PM 26 comments:
ပျော်ရွှင်စွာ ဆုံတွေ့ကြလေသတည်းတဲ့ ..
ငါ့ရင်က လွယ်လွယ်ခွင့်မလွှတ်တတ်လို့ပါ ..
တဂ်ကြွေးတွေဆပ်ပါ့မယ်နော် .. ရေးနေပါတယ် .. တနေကုန်ဒိုင်စားတယ် ဒီနေ့ .. ဒါလေးတော့ စိတ်ထဲရောက်လာလို့ရေးလိုက်တယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 5/28/2009 04:44:00 PM 10 comments:
ရှိတာလေး ထုတ်ကြွားတာပါရှင် .. :D
အိမ်က အကောင် ၃ကောင် :D
မောင်နှမတွေ ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးထားတား)
စာကလည်း ရေးစရာမရှိ .. ဒီတော့ ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ရှိတာလေး ထုတ်ကြွားလိုက်တယ် .. :D
မွေးနေ့တုန်းက လက်ဆောင်တွေထဲမှာ စာအုပ်တအုပ်ရှိသေးတာလေ .. အဲဒါရိုက်မလို့ဟာ အမက ဖတ်နေတာနဲ့ ခုမှထပ်ရိုက် ထပ်တင်ရတယ် .. :D
မွေးနေ့က ပြီးခဲ့တာကြာပေါ့ .. မေ ၁၅ တည်းက .. တင်မယ် တင်မယ်နဲ့ခုမှတင်ဖြစ်တယ် .. အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ် .. မဟုတ်ဘူး .. အရှုပ်တွေ လုပ်နေတာ .. :D .. ပိတ်လိုက်တိုင်း လျှောက်လည်နေတာလေ .. :D
လက်ဆောင်ရတဲ့ စာအုပ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ပေးရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာ .. ဖတ်ချင်ကြတယ်ဆိုတင်ပေးမလို့ ..း) ဖြိုးမော် တခါကြော်ငြာတဲ့စာအုပ်လေ .. "သူတို့ ဒီနေရာကို ဘယ်လိုရောက်လာကြသလဲ" တဲ့ .. ဖတ်ချင်တယ်ဆို တပုဒ်ချင်း ပုံအနေနဲ့တင်ပေးမယ်နော် ..
ရေးသားသူ moekhar at 5/25/2009 09:52:00 PM 24 comments:
တင်ချင်လွန်းလို့လေ .. ရောက်ရောက်ချင်း ကင်မရာအားသွင်းပြီး ရိုက်ထားတာ .. မောင်နှမတွေ ပေးတဲ့ လက်ဆောင်လေးပါ .. အမှတ်တရပေါ့ ..း) မှောင်တော့မှောင်နေတယ် ..
ဒီနေ့ သွားလာစားသောက်လာတာကိုတော့ နောက်နေ့မှ တင်တော့မယ် .. ခုတော့ လူက ဒေါင်းနေပြီလေ .. အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ .. မောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဒီကနေပဲ ပြောလိုက်ပါမယ်နော် .. "အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်" .. ဆုံတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ကံတရားကိုရောပေါ့ ..း)
ရေးသားသူ moekhar at 5/24/2009 11:12:00 PM 18 comments:
ကန်ရေပြင်ကြီး ငြိမ်သက်နေပါစေလေ ..
မှတ်ချက် ။ သူငယ်ချင်းတယောက်တင်ထားတဲ့ MESSAGE ကိုဖတ်ပြီး ရေးဖြစ်သွားတာပါ .. သူ့ခံစားချက်ကိုလည်း သိနေတော့ ၀င်ရောက်ခံစားတယ်ပေါ့ ..း) လူတိုင်းနောင်တတွေ ကင်းဝေးပါစေ ..
ရေးသားသူ moekhar at 5/21/2009 10:50:00 AM 32 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ကဗျာ ထင်တယ်, အတွေး စိတ်ကူး
တကယ်လည်း နားမလည်ပဲနဲ့ ..
အကုန် သိတယ် တတ်တယ် မထင်နဲ့ ..
ခုသိတယ်ဆိုတာ ပါးပါးလေးရယ် ..
ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ ကူမှာလဲ ..
ပါးစပ်နဲ့ ကူတာလောက်တော့ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ..
ကိုယ်ပေးချင်တာ ဖြေဆေးတခွက်ပါ ..
အဆိပ်ကို အဆိပ်နဲ့ ဖြေတဲ့ ဖြေဆေးတော့ မဖြစ်စေနဲ့ ..
ဆေးဆိုတာလဲ တည့်တဲ့လူ မတည့်တဲ့လူရှိသေးတယ်လေ ..
မတည့်တဲ့ဆေးပေးမိရင် စေတနာ ဝေဒနာဖြစ်လိမ့်မယ် ..
ဒါဆို နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့ ..
အရာရာက လွမ်းစရာကို မရှိဘူး ..
ရေးသားသူ moekhar at 5/20/2009 07:42:00 AM 24 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ခံစားချက်, ဖြစ်သမျှအလွဲများ
ရေးသားသူ moekhar at 5/19/2009 06:00:00 PM 15 comments:
တကယ်ပါ .. သူ့ထက်ခက်တာတောင် သူ့လောက်မခက်ဘူး .. ခုကိစ္စက ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရမယ့်အဖြစ်မျိုး .. ဟင်း .. စိတ်ကြီးရယ် ညစ်ပါပေ့ .. မရေးဘူးလို့တော့ စဉ်းစားမိသား .. ဒါလည်းမကောင်းပြန်ဘူးလေ ..
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ပန်ပန်က တဂ်တယ် .. တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲမေးခွန်းပါ .. ထားခဲ့ဘူးသောရည်းစားများတဲ့ .. ပြောစရာလား .. မပြောဘူးဆိုတော့ ဒီထက်ဆိုးတာနဲ့တွေ့မယ်တဲ့ .. ဒီထက်ဆိုးစရာတော့ရှိတော့မယ်မထင်ပါဘူး .. ခုလိုလုပ်တာ ရန်တိုက်တာပေါ့ .. သူများတွေ အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေတာကို .. ရက်ရက်စက်စက် သူမို့လို့နော် .. ပန်ပန် ငါတော့ရေးပြီနော် .. ပြသနာတက်ရင် နင်ပဲ ..
အင်း .. တကယ်တန်းရေးမယ်ဆိုတော့လည်း ကိုယ့်မှာ ရေးစရာမရှိပါဘူး .. ၈တန်း ၉ တန်း ၁၀ တန်း ဒါက ကလေးပဲရှိသေးတယ် .. ၁၀ တန်းပြီး တက္ကသိုလ်တက်တော့လည်း ဒို့က ဒါမျိုးဆို စိတ်မ၀င်စားဘူး .. ဟင်းဟင်း .. အချိန်တန်တော့မှ လက်ထပ်မယ့်သူတွေ့ပြီး ချစ်ကြလေသတည်းပေါ့ .. ဟဲဟဲ .. အဲလိုရေးရင်မကောင်းဘူးလား .. (ယုံမလားမသိဘူး .. :P)
စိတ်ညစ်တယ် စိတ်ညစ်တယ် .. တကယ်ပါပဲ .. တကယ်ကိုပဲရေးမှဖြစ်မှာလား .. မျက်ခုံးတော့ခပ်လှုပ်လှုပ်ရယ် .. စကားပြောတိုင်း အစပြန်မဖော်ပဲ နေနေပါတယ်ဆို .. မြင်ရင် ငါတော့သေပြီ .. ငိုချင်တယ် ..း(
အကိုကြီးတယောက်ထားဘူးတယ် .. အိမ်ရှေ့မျက်စောင်းထိုးက .. အဲဒီတုန်းက တက္ကသိုလ်တက်နေတယ် .. အဝေးသင်ပဲယူတယ်ဆိုတော့ အိမ်မှာ အားအားယားယားပေါ့ .. ကျူရှင်လေးတက်လိုက် .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လစ်လိုက် .. အားရပါးရကဲနေတာ .. နောက် အဲ့အကိုကြီးက ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ငါလည်း အခြေအနေကြည့်လိုက်တယ်လေ .. အဟဲ မဆိုးဘူး .. အိုကေတယ်ပေါ့ .. အဲအကိုကြီးကို တော်တော်ကြိုက်တယ် .. ခါးခါးတို့က အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ ခြေတံလက်တံ လှလှလေးတွေဆို အရမ်းသဘောကျတာ .. အဲအကိုကြီးကို သတိထားမိတာ ကတ္တီပါဖိနပ် အနီရင့်လေးနဲ့ သူ့ ခြေထောက်ကို တွေ့ပြီး ကြိုက်တာ .. ဟီး .. ပါးချိုင့်လည်းပါသေးတယ် .. :P (ငါတော့ နာတော့မယ် .. သိနေတယ် ..း( )
အဲ့အကိုကြီးက ရှုပ်တယ် .. ပါးချိုင့်ကစားတာကိုး .. :D .. သူက သူနဲ့ သင်တန်းတူတူတက်တဲ့အမကြီး သူနဲ့ရွယ်တူပေါ့ .. အဲတယောက်နဲ့ ငြိတယ် .. သိတော့ ပြသနာရှာတာပေါ့ .. နောက်တော့ ရန်ဖြစ်ပြီး ပြတ်ရော .. တကယ်တော့ မဆုံးသေးဘူး .. ဒါပေမယ့် လိုရင်းက အဲဒါပဲဆိုတော့ ရပ်လိုက်တော့မယ် .. အဆင်ပြေရင်တော့ ကိုယ့်ကြောင်းကိုယ်ဝတ္တုတပုဒ်လောက်ရေးမလားလို့ .. ကိုယ့်ကိုယ်မင်းသမီးတင်မလို့လေ .. :P
ဒါကတော့ ထားခဲ့ဘူးတဲ့ရည်းစားပေါ့ .. တော်ပီ တယောက်ပဲပြောပြမယ် .. (လူအထင်ကြီးမလားလို့ :P)
တော်ပီဟေ့ .. ပန်ပန် .. ပြသနာတက်ရင်နင်ပဲနော် .. ငါပြောပြီးပြီ .. သူများတွေကိုတော့ ဆက်မတဂ်တော့ဘူး .. ကိုယ့်လိုခံစားရမှာစိုးလို့ .. :P (အဲလိုစိတ်ကောင်းရှိတာ .. ပန်ပန်လိုမဟုတ်ဘူး .. :D) .. ယခုလိုပြုရ ကုသလကြောင့် ချစ်သူ၏ စိတ်ဆိုးခြင်းမှ ကင်းဝေးရပါလို၏ .. :P
ရေးသားသူ moekhar at 5/18/2009 12:09:00 PM 22 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 5/15/2009 10:31:00 AM 52 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 5/12/2009 02:57:00 PM 22 comments:
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းပေါများခြင်းကလည်း မင်္ဂလာတပါးပါပဲ .. တဦးတည်း အထီးကျန်နေမယ်ဆို ဘယ်လောက်တောင်ပျင်းဖို့ကောင်းလိုက်မလဲနော် .. ဒီကို ရောက်ခါစကတော့ သူငယ်ချင်းဆိုလို့ လက်တဖက်တောင်မပြည့်ပါဘူး .. ခုနောက်ပိုင်းတော့သူငယ်ချင်းတွေ အမတွေ ညီမတွေ မောင်လေးတွေ အကိုတွေနဲ့ စိုစိုပြေပြေဖြစ်လာပြီဆိုပါတော့ ..း)
တနင်္ဂနွေနေ့ဆို စောစောစီးစီး ထလေ့ကိုမရှိပါဘူး .. မနက်ဖြန်ရုံးပိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ အင်တာနက်ကို ညလုံးပေါက်သုံးရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားတာနဲ့အညီ ကျန်ခဲ့တဲ့စနေ (၉.၅.၀၉) ကလည်း ဘလော့ကို ပြင်ရင်း ကလိရင်း မနက် ၅နာရီထိုးပါတယ် .. နောက်နေ့မနက် အမေများနေ့ကျတော့ အမက အပြင်ထွက်ဖို့လုပ်နေသံကြားတာနဲ့ နိုးသွားတယ် .. ဒီလိုနဲ့ မျက်လုံးပွင့်ရင် အထီးကျန်မနေတတ်လို့ ကွန်ပျူတာခလုတ်လေး အသာဖွင့်လိုက်တယ် .. အမက မအိပ်တော့ဘူးလားတဲ့ .. နိုးမှတော့ သိပ်လည်း အိပ်ချင်စိတ်ကမရှိ .. ဒီလိုနဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လာတာပေါ့ ..
ဘလော့စွဲနေသူတွေ ထုံးစံအတိုင်း ကွန်ပျူတာပွင့်တာနဲ့ အရင်ဖွင့်ဖြစ်တာ ဘလော့ပါပဲ .. ကိုယ့်ဘလော့ကိုဖွင့်လိုက်တော့ အဆိပ်ခွက်ရဲ့ အော်သံကျယ်ကျယ်ကိုကြားရတယ် .. သီချင်းလိုချင်လို့အက်ထားပါတယ်တဲ့ .. ခုသူလိုချင်တဲ့သီချင်း ရပြီဆိုတော့ ခုပြန်ဖြုတ်ရတော့မယ်ထင်တယ် .. :P .. ဒါနဲ့ ဒီလိုနဲ့ မနက်စောစော (၁၀ နာရီ) ကို အဆိပ်ခွက်အော်ဂျက်နဲ့ စဖွင့်လိုက်တယ် ..
ဒီလိုနဲ့တဆက်တည်း ချစ်မမ မရောင်က တက်လာပြန်ရော .. သူနဲ့လည်း ဆက်ပွားတာပေါ့ .. ပွားရင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်တဲ့ .. ဒီက ပြန်အိပ်ဖို့ချောင်းနေတာ .. ရာသီဥတုက ကိုယ့်ဘက်မှာရှိနေတာကို အပြင်ထွက်ရင် ကိုယ့်လောက်မိုက်တဲ့လူရှိပါ့မလား .. ဒါပေမယ့် မိုက်ဇာတ်ပဲ ခင်းလိုက်တယ် .. :P သိပ်တော့ မခေါ်လိုက်ရပါဘူး .. ဒီကလည်း ပျင်းပျင်းနဲ့ ဘာလုပ်ရပါ့ စဉ်းစားနေတဲ့လူဆိုတော့ .. သွားမယ် လာလေ ပေါ့ ..
ဘယ်သူတွေလဲ ဘယ်လဲ ဘာလဲ ဘယ်ချိန်လဲ ဘယ်နေရာလဲ နဲ့ မေးခွန်းများစွာကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးတဲ့နောက်မှာ နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ ၂နာရီခွဲ အောချပ် အမ်အာတီပါတဲ့ ..
ထုံးစံအတိုင်းမိုးခါးတို့ အချိန်မှန် ၂နာရီခွဲချိန်းတာ ၁၅ မိနစ်လောက်နောက်ကျသွားတယ် .. ချိန်းထားတဲ့နေရာရောက်တော့ မရောင်ရယ် .. ကိုရီနိုရယ်က ရောက်နေပြီ .. အဆိပ်ခွက်ကိုလည်း မြင်လိုက်တယ် လှစ်ခနဲ .. သူက လက်မှတ်ကို ရှေ့တော်ပြေးသွားဝယ်ပါတယ်တဲ့ .. နောက်တော့ ဂျပန်ကောင်လေးနဲ့တွေ့ (သူက အရင်ရောက်နေတာပါ .. သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ ..) ဘယ်သူကျန်သေးလဲဆိုတော့ တောင်ပေါ်သား ဦးရှင်ကြီးနဲ့ မကြယ်တို့ကို စောင့်ရမယ်ဆိုပြီး စောင့် .. အတိုချုပ်ရရင်တော့ နောက်ဆုံး လူစုံသွားတယ်ပေါ့ .. ဒီလိုနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ် .. ဗီဗိုးစီးတီးသွားထိုင်တယ် .. ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ကြည့်တယ် .. ဒီလောက်ပါပဲ .. :D
နောက်ဆုံးတော့ the end ပေါ့နော် .. :P
ခွဲခွာချိန်တိုင်လို့ ခွဲရမယ်ဆိုတော့ ပြုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲ ခွဲခွာလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ .. နောက်တချိန်အတွက်လည်း တခါတည်း ဘွတ်လိုက်သေးတယ် .. နောက်တပတ်အတွက်ကိုလေ .. ဒါတော့ မကြာမီ လာမည် မျှော်ပေါ့ .. အဲဒီအခါကျ ထပ်ရေးမယ်နော် .. ခုတော့ တော်သေးပြီ ..
အောက်က လင့်တွေမှာလည်း သူတို့တွေရေးထားတာရှိသေးတယ် .. တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ မောင်နှမတွေပေါ့ .. အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ .. ပုံတွေလည်းတင်ထားကြတယ် .. အဲဒါကြောင့် အပျင်းထူပြီး မတင်တော့ပါနော် ..း)
အဲဒီနေ့က တကယ်ပျော်ရပါတယ် .. ခြေကိုလည်းတိုရောပဲ .. အိမ်ရောက်တော့လည်း တုံးကနဲပဲ .. မနက် ရုံးသွားဖို့အလန်းမြည်တော့တောင် အိပ်မက်မှတ်နေတာ .. (အဲလိုနိုးကြားပါတယ် ..:D)
ရေးသားသူ moekhar at 5/11/2009 10:40:00 PM 12 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 5/09/2009 05:30:00 PM 15 comments:
မိုးမိုးရဲ့ ကြယ်သီချင်း နားထောင်ရင်း ဒီစာလေးကို ရေးလိုက်မိပါတယ် .. တကယ်တော့ သီချင်းစာသားနဲ့ ဒီကဗျာ သိပ်တော့မဆိုင်ပါဘူး.. (ကြို ကန်ထားတာ :D) နားထောင်ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ ပါ
ရေးသားသူ moekhar at 5/03/2009 01:23:00 AM 12 comments:
ရေသူမ တကယ်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြလား .. ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ စိတ်ကူးယဉ်လို့တော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲ .. ငယ်ငယ်ကတော့ ရေသူမဇာတ်လမ်းကို တခါပဲကြည့်ဖူးတယ် .. လူကြီးတွေက မကြည့်ခိုင်းဘူးလေ .. နောက်ပိုင်းလည်းမကြည့်ဖြစ်ဘူး .. ကြည့်ဖူးသလောက်ကိုတော့ မှတ်မိနေတယ် .. ကြည်ဖူးတယ်ပေါ့ .. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ် .. မြန်မာရေသူမကားရှိတယ်တဲ့ .. ဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ .. ဟုတ်တယ်ဆို ဘယ်လိုရိုက်လဲ သိချင်မိတယ် .. ဒါနဲ့ ဟိုရှာဒီရှာ ရှာကြည့်မိတယ် ..
အောင်ရဲလင်းနဲ့ သဉ္ဖာဝင့်ကျော် တို့ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူရှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရေသူမကားကို ခုပဲကြည့်ပြီးတယ် .. စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ကြည့်ကောင်းပါတယ် .. ဇာတ်လမ်းကို အတင်းဖြတ်လိုက်တာတော့ ရှိတယ် .. မြင်နေကျကားတွေလိုမဟုတ်ပဲ တမျိုးလေးပေါ့ .. ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်လည်း တခြားကားတွေထက် ပိုအားထုတ်ကြိုးစားထားတယ်လို့ပြောထားတယ် .. အားပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ် .. ဒါမှလည်း မြန်မာ ရုပ်ရှင်လောက ဗီဒီယိုလောက တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ် .. ပြောင်းလဲသင့်ပြီ ခွဲထွက်သင့်ပြီလေ ..
ခုဒီကားမှာ ကွန်ပျူတာ animation တွေသုံးထားပါတယ် .. မဆိုးပါဘူး ကြည့်ရတာ .. ကြည့်ကြည့်ချင်တယ်ဆို အောက်ကလင့်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်ချင်ရင် အောက်ကလင့်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ..
(လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှ သတင်း) http://snapshot-news.com/modules.php?name=News&file=article&sid=14768
ရေးသားသူ moekhar at 5/01/2009 10:02:00 AM 11 comments: